भारतीय पर्यटकलाई किन भड्काइँदैछ ? « GDP Nepal
भारतीय पर्यटकलाई किन भड्काइँदैछ ?
Published On : 1 February, 2020 10:45 am
काठमाडौं । नेपाली पर्यटन बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा रहेको भारतीय पर्यटकलाई भड्काउने खेल सुरु भएको छ । पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको रोजाइमा नेपाल परिरहे पनि विभिन्न बहानामा उनीहरुलाई रोक्न खोजिएको पाइएको छ ।
नेपालको विविधतायुक्त मौसमका कारण विशाल भारतका पर्यटकका लागि बाह्रै महिना नेपाल भ्रमण उपयुक्त भएकाले नेपाली पर्यटनको दिगो विकासका लागि भारतीय नै मुख्य स्रोत हुन् भन्नेमा द्विविधा छैन ।
तर, पछिल्ला दिनमा भने भारतीय पर्यटकमाथि नेपाली प्रशासनको व्यवहार र केही घटनाका कारण नेपालको ब्रान्डिङ भारतीय पर्यटन बजारमा बिग्रिइरहेको देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न नसके नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मात्र नभइ समग्र पर्यटन बजार नै संकटमा पर्न सक्छ ।
परमिट नभएको गाडी भन्दै सिधै भन्सार चलान गर्दिनु जस्ता कारणले उनीहरूको यात्रा असहज बन्दै गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समेत उल्लेख गर्न थालेका छन्, जुन नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तै, नेपालमा धेरै भारतीय पर्यटकहरूको मुख्य उद्देश्य क्यासिनोमा रमाइलो गर्न आउनु भए पनि उनीहरूले ल्याएका पैसा जफत गरेर वातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ अघिल्लो साता दामनमा भएको घटनामा आठ भारतीयको दुखद् मृत्युले पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्र भारतका लागि असहज बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारले यी र यस्ता समस्या बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।